Privkpụrụ Nzuzo weebụsaịtị | Martech Zone
Mụ na Marty nọ na Social Media Club dị na Chicago ndị ezigbo mmadụ nwere na Edelman. Isiokwu bụ nghọta na Social Media na panelists ndị Tom Chernaik, CEO nke Ebere.mp, Michael Kiefer, GM na BrandProtect, Rich Sharp, SVP nke Digital Health Group Edelman na Roula Amire, Onye Nchịkwa Na-achịkwa nke Ragan.com. Mkparịta ụka a lekwasịrị anya n'ihe egwu na ihe egwu metụtara na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na otu ụlọ ọrụ nwere ike isi hazie, chebe ma zaghachi okwu. Ọ bụ oké mkparịta ụka na otu na ibu ụdị na-tackling ugbu a… M olileanya na obere na-ajụ-sized ulo oru na-amalite na-achọpụta dị ka nke ọma!
Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na-emepụta ngwa ngwa ngwa ntanetị na-achọpụta ihe n'ịntanetị, ụlọ ọrụ gọọmentị etiti na ndị otu nwere mmasị na-azụ ahịa na-agbaso ụkpụrụ nzuzo siri ike karị. Esozina, usoro nyocha ọpụpụ weebụ kachasị ọhụrụ na US na-enweta ala, yana ndị na-enyocha ihe nchọgharị na ụlọ ọrụ na-enye teknụzụ ọpụpụ dị mfe iji debe ozi nkeonwe nkeonwe. E nweela usoro na Europe ugbua: Iwu European ePrivacy bụ iwu na-achọ saịtị iji nweta nkwenye n'aka ndị ọbịa iji soro ha. Hụ nsogbu dị na aka, yana ọnye ego nwere ike ịdaba na mmetụta ndị ọzọ.
Ihe omuma ihe a weputara site na Kwalite. Nzuzo Ensighten bụ ihe nzuzo na nnabata nke na-eme ka nnakọta data nnata webụsaịtị gị zuru oke na iwu nzuzo gị yana iwu US na mba ụwa site na nyochaa mkpado weebụsaịtị gị niile. Nzuzo nke Ensighten na-enyere saịtị aka irube isi na ihe nchọgharị Esona (DNT) yana ndọtị iwu kuki nke UK, yana ị na-enye gị ohere ịnye ndị na-azụ data nchịkọta ma ọ bụ pụọ na arụmọrụ na webụsaịtị gị.
Tags: nnabatamara ihenzuzonghọta